10 Ethakazelisayo Iningi zemininingwane Zokusebenzela ESpain | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Qeqesha Ukuhamba Spain > 10 Ethakazelisayo Iningi zemininingwane Zokusebenzela ESpain
(Kugcine ukubuyekezwa On: 19/06/2020)
Kunezindlela eziningana iziteshi ezithakazelisayo futhi esebenzayo isitimela e-Spain. Uzothola ijubane eliphezulu, ibanga naphakathi, lesifunda, wedolobha kanye Ihhotela-isitimela ukuhamba kulo lonke izwe. Kusukela iziteshi ezinkulu zanamuhla ezincane sizungezwe uhlobo, lezi izi 10 Spain sika Ethakazelisayo kakhulu zemininingwane Zokusebenzela.
Barcelona, Spain (Sants Isiteshi Sesitimela)
Lesi siteshi sanamuhla singenye esiteshini esikhulu kakhulu sesitimela e-Barcelona. Kuyinto main sesitimela kokubili ezweni noma emhlabeni jikelele uxhumano isitimela. Kulesi siteshi oluphakeme esikhulu kubekwe phakathi enkabeni yedolobha. It is esetshenziswa kokubili bendawo futhi izivakashi futhi ngeke sixhumane nawe iziteshi kakhulu isitimela yonkana Spain.
Madrid (Puerta de Atocha Isiteshi Sesitimela)
Kulesi siteshi iyona enkulu e Madrid futhi kade iminyaka eminingi. Kuyinto esiteshini amahle and one of the most Fascinating Train Stations, ukuthi iyisonto oluhle ezindaweni ezishisayo engadini kanye ufudu engcwele ngaphakathi. On Mashi 11, 2004, usuku manje eyaziwa eSpain 11-M, 191 abantu abashone uchungechunge ngamabhomu. Zenzeka e izitimela ezine somhambi kokubili lokhu esiteshini futhi iseduze.
Sevilla (Santa Justa Isiteshi Sesitimela)
Santa Justa siteshi zezinkampani ephithizela kunawo wonke Spain, nabantu abangu-ezisekelweni nambili. It lethiwa ngelinye yabangcwele Seville eziyizintandokazi (udadewabo Santa Rufina). Lesi sakhiwo itholakala engxenyeni Eastern enkabeni yedolobha Seville sika. I Yakha ahlanzekile kanye nomklamo bayisibonelo sabantu sesimanje izinhlelo edolobheni sika 1991.
Ronda Isiteshi sesitimela
Ronda kuthiwa elinye lamadolobha amahle kakhulu eSpain. Lokhu kukhetha waseSpain Ethakazelisayo zemininingwane Zokusebenzela kuyinkomba lokhu, futhi ngokuqinisekile okumele abonwe. Isiteshi Yakhiwa emuva 1892, Nokho, ke ibuyekeziwe futhi ngokumangalisayo zigcinwe eminyakeni. Isiteshi usenayo "Empeleni i-Anglo" noma abaphathi bamakoloni Indian ukubukeka Nokho. Kombhede izinkuni insephe isekelwa ekhandiwe yensimbi izinsika ezinqamula platform eduze.
Puebla de Sanabria Isiteshi Sesitimela
Kulesi siteshi itholakala kuleli dolobha elihle endala Zamora. Kuyinto omunye zezitimela edume kakhulu eSpain ngenxa yokungathathi-ubuhle bayo okuyinto ngenxa izakhiwo zesifunda kanye zendabuko, nge slate rooves, amatshe ashlar futhi enkulu emaphakathi lwaleli ilunga. Kulesi siteshi loke nje lidume ngokuthunga ukuhlobana esaba nawo Ruta de la Plata, njengoba uxhumano indawo.
UZamora Isiteshi Sesitimela
Kulesi siteshi itholakala emzini Zamora e Castile ne Leon futhi ubhekwa omunye Ethakazelisayo kakhulu zemininingwane Zokusebenzela eyake yenziwa. ukwakhiwa kwalo kwadingeka ukuba kumiswe e 1929 futhi eliphelele lagcina liqedwe ngo 1958. It has a ovusa Renaissance ugqozi nabanye imininingwane isikhumbuzo sekwephuzile isitayela Gothic. It ngempela umoya ukuthatha.
Estacion del Norte Isiteshi Sesitimela
Lokhu esiteshini sesitimela ingatholakala Edolobheni laseSan Sebastian, indawo enhle ukunikela kokubili ulwandle Amazing nokubukwa entabeni. Kulesi siteshi ukhangwa ngokwako njengoba kombhede ukumboza ezisekelweni kwadalwa uGustave Eiffel ngubani umuntu kakhulu efanayo owaklama Eiffel Tower France.
Canfranc estacion Isiteshi Sesitimela
Lokhu kukhetha lama Ethakazelisayo zemininingwane Zokusebenzela zingatholakala ngasemngceleni ophakathi eSpain France. It kwavulwa 1928 futhi elika "Titanic we Izintaba."Yakhiwa ukuze umfutho kwezohwebo ophakathi kwala mazwe womabili kodwa ngemva akuzange kuqhubeke futhi ilahliwe kusukela 1970. Isiteshi is awela izingcezu namuhla. Izivakashi esakwazi ukubona ifana kanjani grand kwakunjalo osukwini lwayo. izivakashi Okuningi Spanish uvakashele isayithi kusukela 2013. Ngaphezu kwesibalo sabantu bonke abake bavakashela esiteshini ngesikhathi evulekile.
Estacio del Nord Isiteshi Sesitimela
Lona main sesitimela emzini Valencia. Yakhiwa 1917 futhi waba uphawu lokuhlala European izakhiwo modernist. Kuyinto isakhiwo esikhulu nge iwashi elikhulu futhi ebaziwe ukhozi maphakathi, okuyinto ezinye izakhi omele kakhulu esiteshini namuhla. Lokhu Pick of Ethakazelisayo zemininingwane Zokusebenzela Uphinde abhekwe isakhiwo lesabelo Cultural.
Algeciras Isiteshi Sesitimela
Kulesi siteshi itholakala engxenyeni engenhla Algeciras futhi amakhilomitha ambalwa ukusuka ethekwini ngenxa imfuneko zomlando lokho kwakusho kwakudingeka kube ungaphandle kwebanga le-Gibraltar 100 ton inganono. This train is used by people who would like to visit the Rock of Gibraltar. Waqale wavula e 1982 futhi usenayo i look ezindala-school kanye nomuzwa kuso.
Nakuba kunamaseli abaningana kubo ezisebenza Spain namuhla, lezi izi 10 iziteshi isitimela Spain athakazelisa kakhulu ukuvakashela. Izincwajana zemininingwane travel ingxenye enkulu ye ezokuthutha zomphakathi uhlelo kuleli zwe futhi iqhubeke ngaphandle kwezihibe ngaphesheya ibhodi. Kunezindlela eziningana amahle usuku uhambo kanye ne phezu-ubusuku ezamehlela ukuba kwadingeka ngesitimela futhi kubalulekile ngenkathi yakho ukuze wenze ukusetshenziswa nojantshi uma uvakashela Spain.
Thola amathikithi umhlabeleli nengabizi eYurophu Londoloza Isitimela, Kuthatha 3 minutes now to book a train ticket on Londoloza zemininingwane. kuya Ethakazelisayo kakhulu zemininingwane Zokusebenzela e Spain, Khokha usebenzisa zonke izindlela zokukhokha ethandwa kuhlanganise, credit card kanye PayPal.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-fascinating-train-stations-spain%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi
europeantravel izitimela TrainStation Izikhangibavakashi uhambo lokuhamba